Shaabbadda Sax ah, Ku -tiirsanaanta Birta, Is -habeynta Ku -Tallinta Birta - KORIN -Elec
Had iyo jeer wuxuu dhigaa tayada meesha ugu horeysa oo si adag u kormeera tayada alaabta ee hab kasta.
Our Factory ayaa koray galay Premier ISO9001 a: 2008 soo saaraha shahaado of tayo sare leh, alaabta kharash-ool ah
Magaalada Dongguan waxayna leedahay ku dhawaad ​​180 shaqaale iyo 2 warshadood oo ku dhow 10,000 mitir oo laba jibbaaran hadda.
RAISING-Elec oo la aasaasay 2000 wuxuu ku yaal Magaalada Houjie, magaalada Dongguan wuxuuna leeyahay ku dhawaad ​​180 shaqaale iyo 2 warshadood oo ku dhow 10,000 mitir oo laba jibbaaran hadda. Waxaan nahay OEM/ODM soo -saare xirfadle ah oo diiradda saaraya shaabadaynta birta iyo mashiinnada & CNC, isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyo taageeraya waxaanan siinnaa “hal joogsi” taageero macaamiisha dhammaan taxanaha biraha, sida shubista dhinta, dhejiyaha…
BOOQDA MACMIILKA Wararka
Aaway baaxaddeena Ganacsi: Ilaa hadda waxaan ka dhignay nidaamyo wakiil prosy ah Algeria, Masar, Iran, Koonfur Afrika, Hindiya, Malaysia iyo Wadammada kale ee Koonfur -bari Aasiya. Sidoo kale Bariga Dhexe iyo Koonfurta Ameerika. Waxaan leenahay lamaane iyo macaamiil tiro badan.
Noocyada caadiga ah ee farsamaynta
Waa in ay jiraan aqoon badan oo farsamayn ah oo aadan daruuri ka aqoonin farsamaynta. Machining -ku wuxuu loola jeedaa habka lagu beddelayo cabbirka guud ama wax -qabadka shaqo -qabadka oo leh qalab farsamo. Waxaa jira noocyo badan oo makiinado. Aynu eegno inta badan annaga ...
Faahfaahinta habka shaabadaynta
Habka shaabaddu waa hab wax lagu farsameeyo biraha. Waxay ku salaysan tahay curyaaminta balaastigga birta ah. Waxay u isticmaashaa qalabka dhinta iyo shaabadaynta si ay cadaadis ugu saarto xaashida si ay xaashidu u soo saarto qaab -dhismeed caag ah ama kala -soocid, si loo helo qaybo (qaybo shaabadeysan) oo leh qaab, cabbir iyo wax -qabad gaar ah ....
Geeddi -shaabadaynta: saldhigga badan ee dhinta shaabadaynta joogtada ah ee joogtada ah, mashiinka mashiinka diyaarinta ciddiyaha ayaa hoos loogu shaabadeeyey si loo dhammaystiro geedi -socodyada sida isku -dubaridka, sameynta iyo alxanka. Si kastaba ha ahaatee, weli waxay leedahay qayb yar oo ku xidhan xaashida shaabadaynta, oo xaashida shaabaddu waxay gashaa ...
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Boolal, Aluminium CNC Qaybo Machined, Sheet Birta Stamping Products, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Dhimashada Magnesium, Guga Saxanka, Dhammaan Alaabta